काठमाडौं आउन पिसिआर ! – Sourya Online
काठमाडौं आउन पिसिआर !
सौर्य अनलाइन २०७७ चैत १८ गते २१:४६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । कोरोना महामारीको जोखिम दोहोरिने खतरा बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले उपत्यका भित्रिने नाकामा निगरानी बढाएको छ । विशेषगरी भारतबाट आउनेमा कोरोना संक्रमण बढि देखिन थालेपछि काठमाडौं प्रवेशमा कडाई गर्न थालिएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली पराजुलीका अनुसार काठमाडौं भित्रिने प्रमुख नाकामा कडाइ थालिएको छ । बुधबारै स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा नाकामै कोरोना परीक्षण गर्ने बताएको छ । ती नाकामा अहिले ज्वरो आएका तथा रूघाखोकी लागेका व्यक्तिहरूलाई अनिवार्य पिसिआर परीक्षणमा पठाइन थालेको छ । ‘केही दिनयता हामीले रूघाखोकी र ज्वरो आएका व्यक्तिहरूलाई परीक्षणमा पठाउने गरेका छौं,’ पराजुलीले भने ।